महामारीमा बालबालिकाको नियमित खोप छुट्यो, मृत्यु र अपांग हुने दर बढ्ने चेतावनी « Radio Narayani
७ भाद्र २०७८, सोमबार ००:०० ६ : ४७ मा प्रकाशित
काठमाडौं,७ भाद्र । कोभिड–१९ को महामारीको कारण सन् २०२० मा विभिन्न रोगविरुद्ध बालबालिकालाई दिइने खोपको ‘कभरेज’ दर घटेको छ । जसको कारण दीर्घकालीन रूपमा विभिन्न संक्रामक रोगको संक्रमण, मृत्युदर र अपांग हुने दर बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
सन् २०२१ मा उक्त खोपको कभरेजदर ७९ प्रतिशत पुगे तापनि सामान्य अवस्थाको (९१ प्रतिशत) तथ्यांकलाई भेटेन । सन् २०१९ मा भ्यागुते रोग, लहरे खोकी र धनुष्टंकारको लागि दिइने डीपीटी खोपको कभरेज दर ९० प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा उक्त कभरेज दर ४ प्रतिशतले घटेर ८६ मा झ¥यो । त्यसैगरी सन् २०२० मा कभरेज दर केही बढे पनि यो मात्रा ८७ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ ।
सन् २०२० मा बच्चा जन्मिएको १५ महीनामा दिने दादुरा रुबेला विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लिने बालबालिकाको खोप कभरेज दर ८४ प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा उक्त कभरेज दर ८० प्रतिशतमा झ¥यो । सोही वर्ष दादुरा रुबेलाको दोस्रो मात्राको कभरेजदर स्वाट्टै घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०१९ मा यो खोपको कभरेजदर ७३ प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा उक्त कभरेजदर ३ प्रतिशतले ओरालो लागेर ७१ प्रतिशतमा झर्यो । यो कभरेजदर नेपाल सरकारले लक्ष्य राखेको भन्दा २६ प्रतिशतले कम हो ।
त्यस्तै सन् २०१९ मा ७६ प्रतिशत रहेको निमोनिया विरुद्ध लगाउने एफ.आई.पी.भी. खोपको कभरेज दर सन् २०२० मा ६९ प्रतिशतमा झ¥यो । यो खोप पनि बालबालिका जन्मिएको ६ हप्ताभित्रमा लगाइन्छ । त्यस्तै सन् २०१९ मा ८१ प्रतिशत कभरेज दर रहेको पीसीभी खोपको कभरेज दर सन् २०२० मा ७८ प्रतिशतमा ओर्लियो । त्यसैगरी सन् २०१९ मा भन्दा सन् २०२० मा जापानी इन्सेफेलाइटिस विरुद्ध दिइने खोपको कभरेजदर ४ प्रतिशतले घट्यो ।
यो उपलब्धि नगुमाउनलाई पनि खोप कभरेज दर बढाउनुपर्ने डा. गौतमको भनाइ छ । ‘१२ वटै खोपहरू कम्तीमा ९५ प्रतिशत कभरेज पु¥याउनुपर्ने लक्ष्य छ तर महामारीले त्यो लक्ष्यलाई झन् पर धकेलिदियो’, उनी भन्छन् ।
‘बालबालिकाले खोप नपाउनु स्वास्थ्य प्रणालीकै टाउको दुखाइ’
कोभिड–१९ को महामारी शुरू हुनु अगाडि नै बालबालिकालाई बाल्यकालीन अवस्थामा हुने रोगहरूबाट बचाउन पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको चिन्ताजनक संकेत पाइएको थियो । उदाहरणको रूपमा दुई वर्ष अगाडि फैलिएको दादुराको महामारीलाई समेत लिन सकिन्छ । अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीले यो अवस्थालाई झनै जटिल बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको समतामूलक वितरण हुनुपर्छ भन्ने सबैको विचार भए पनि खोपको वितरणमा सधैं विभेद हुने गरेको हेक्का राख्नुपर्ने डब्लुएचओले उल्लेख गरेको छ । ‘अहिले खोप कभरेज घट्नु भनेको दीर्घकालीन रूपमा सबै देशको टाउको दुख्नु हो, यसले लामो समयसम्म धेरै दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ’ डब्लुएचओले भनेको छ ।
विश्वव्यापी खोप एजेण्डा २०३० ले निर्धारण गरेका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्न विभिन्न निकाय, देश तथा विभिन्न साझेदारहरू काम गरिरहेका छन् । खोप एजेण्डा २०३० को उद्देश्य बाल्यकालीन अवस्थामा दिइने अत्यावश्यक खोपको कभरेज ९० प्रतिशत भन्दा माथि पु¥याउने हो ।
त्यस्तै कुनै पनि खोप नलगाएका (शून्य मात्रा) बालबालिकाको संख्या आधा घटाउने र निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा रोटाभाइरस तथा न्युमोकोकस जस्ता नयाँ जीवनरक्षक खोपको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने हो । तर महामारीले यो विश्वव्यापी खोप एजेण्डामा असर पारेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अमेरिकाको वासिङ्गटनस्थित इन्ष्टिच्युट अफ हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभ्यालुसन (आई.एच.एम.ई.)का अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रकाशित गरेको नयाँ विश्लेषणले पनि कोभिड—१९ का कारण बाल्यावस्थामा दिइने खोप सेवामा विश्वव्यापी रूपमा सन् २०२० मा कमी आएको देखाएको छ ।
आई.एच.एम.ई.ले गरेको विश्लेषण डीपीटी र दादुरा विरुद्धको खोपका लागि विभिन्न देशहरूले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आधारित छ । जसमा विद्युतीय स्वास्थ्य तथ्याङ्क र मोबाइल फोनको अज्ञात विधि मार्फत सङ्कलन गरिएको मानवीय आवतजावतको तथ्याङ्कलाई पनि विश्लेषण गरिएको छ ।
दुवै विश्लेषण अनुसार देश तथा समग्र स्वास्थ्य समुदायले कोभिड—१९ को नयाँ लहर र कोभिड—१९ विरुद्धको बृहत् खोप अभियानले नियमित खोप कार्यक्रमलाई बाधा नपु¥याउने, छुटेकाहरूलाई समेट्ने कामलाई निरन्तरता दिने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भनेको छ । उक्त अध्ययनले भनेको छ, ‘कोभिड–१९ र बालबालिकाको नियमित खोप दुवैको कभरेज बढाएमा मात्रै हामी दीर्घकालीन रूपमा अनेकौं सरुवा रोगबाट बच्न सक्छौं ।’
‘बालबालिकाको खोप लगानी हो’
नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रको समूहबाट र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा उक्लिने लक्ष्य लिएको छ । युनिसेफका अनुसार नेपालमा समग्र गरीबी घट्दै गएको भए तापनि दुई–तिहाइ बालबालिका सातमध्ये कम्तीमा एक आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार, एशियाका ५८ राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल तेस्रो अति गरीब राष्ट्र हो जसको, मानव विकास सूचकांक छैटौं स्थानमा छ । यसका अतिरिक्त धन, भूगोल, भाषा, शिक्षा, जाति, लिंग, उमेर, अपांगता र आयका आधारमा पनि देशमा निकै असमानता छ ।
नेपालका अधिकांश बालबालिका र किशोरकिशोरी अरू देशले गरिरहेका विभिन्न प्रगतिबाट बाहिर रहेको युनिसेफले हालसालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल र बालबालिका’ नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका बालबालिका कैयौं अधिकारबाट बञ्चित छन् । खोप त्योमध्येको एक हो ।
बालबालिकालाई खोप दिनु भनेको मानव पूँजीमा लगानी गर्नु रहेको युनिसेफको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार, गर्भाधानदेखि दुई वर्षसम्मको समयावधिमा दिइने उचित हेरचाह र पोषणले उनीहरूको हुर्कने, सिक्ने र गरीबीबाट उम्किन सक्ने क्षमतामा ठूलो प्रभाव पार्दछ ।
बालबालिकालाई खोप दिंदा परिवार, समुदाय र देशकै गरीबीको चक्र भंग गर्न सहयोग पुग्नुका साथै समाजको दीर्घकालीन स्वास्थ्य, स्थिरता र समृद्धिमा पनि प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बालबालिकामा लगानी गरिने हरेक एक अमेरिकी डलरले भविष्यमा ६ देखि १७ गुणासम्म प्रतिफल दिन्छ’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।